Naples, Marco Island na Everglades CVB Executive Director na-agbada
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Naples, Marco Island na Everglades CVB Executive Director na-agbada
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Jack Wert, onye ama ama ama nke Collier County's Tourism Division ekwuputala atụmatụ ịla ezumike nká na ọkwa ya, bido na Septemba 30.
Ndị isi na-akwanyere ùgwù na ndị maara nke ọma na-ejide ọnọdụ ya dịka Onye isi Nchịkwa na Collier County kemgbe 2002.
Wert emeela ka ọ pụta ìhè na uru ụlọ ọrụ bara uru site na ọnọdụ akụ na ụba nke Collier County na Southwest Florida.
Nlekọta nke ngalaba ahụ ga-agbanwe na Paul Beirnes onye na-eje ozi ugbu a dị ka onye osote onye isi oche nke CVB.
Naples, Marco Island na Everglades CVB na-ekwuwapụta na Jack Wert, onye ama ama ama nke Collier County's Tourism Division ekwuputala atụmatụ ịla ezumike nká na ọkwa ya, bido na Septemba 30, 2021.
Onye a na-akwanyere ùgwù nke ọma na onye maara nke ọma ejidewo ọnọdụ ya dị ka Executive Director na Collier County kemgbe 2002. N'oge ọ na-arụ ọrụ, ọ buliri profaịlụ nke ebe ọ ga-aga nke ọma, na-eweta Southwest Florida dị oke ọnụ na ọkwa ya ugbu a dịka otu n'ime okomoko kachasị elu na njem. ebe njedebe na ndu ochichi nke US Wert na ahia ahia di iche-iche mere ka odi nkpa, odi nma banyere onodu aku na uba nke mpaghara a, na-abawanye nleta site na 53%. Ebe a na-anabata ndị ọbịa 2M ugbu a.
Onye na-akwado ike maka njem na njem nleta na mpaghara, nke mba na nke mba, Wert emeela ka ọ pụta ìhè na uru ụlọ ọrụ bara uru na akụ na ụba nke Collier County na Southwest Florida. Mgbe afọ iri na otu kwusiri ike maka okike na uto nke Seminole County Florida CVB, Wert tụgharịrị azụmaahịa ya na azụmaahịa ya gaa na nsogbu ọhụrụ na Collier County. Gbanyụọ ọgba aghara nke 9/11 na ụlọ ọrụ njem chọrọ stealth na ịdị uchu iji merie. Ọ nọ n'isi nke ọtụtụ ọrụ profaịlụ dị elu gụnyere ịmegharị aha na mgbasa ozi zuru ezu nke mere ka ebe a na-aga n'ọkwa ọhụrụ, na ịtọghe na mmeghe nke $ 150 nde Paradise Coast Sports Complex. Ihe oru abuo a tinyere ebe a n’iru na etiti ndi ohuru na ndi mba ozo.
O mekwara mmetụta dị ukwuu na obodo na mpaghara dị iche iche nke dabere na njem maka ndụ ha site na mbọ ya na atụmatụ ya niile na ọrịa COVID-19. Ọganiihu ya emeela ka ọ bụrụ onye amaara ama na ụlọ nzukọ nke steeti steeti na Tallahassee na Capitol Hill dị na DC dị ka onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ. Obodo guzosiri ike na ndị njem nlegharị anya, Wert nọ na ọtụtụ ndị isi nchịkwa gụnyere VISIT Florida, Destances International, Ebe Florida, Florida Gulf Coast University's Resort & Hospitality School na SKAL International Southwest Florida, n'etiti ndị ọzọ.
Ihe ịma aka kachasị nso a nke ọrịa ọrịa COVID-19 gosipụtara n'ezie nka na nduzi ya ka ọ na-agagharị ebe ọ na-aga site na ọdịda akụ na ụba yana mmeghe mmeghe nke mpaghara njem na njem ndị njem.
Isi ihe sitere na ọrụ Wert gụnyere ịsọpụrụ HSMAI Kasị Echiche Pụrụ Iche na Ahịa & Ahịa. Ọ na - ejide aha Certified Destination Management Executive (CDME), yana Ọkachamara na Njikwa Ebibi (PDM).
Naples, Marco Island, Everglades CVB Executive Director, Jack Wert kwuru, "Okwu enweghị ike igosipụta mmetụta ọ dị m taa, ka m si n'ọkwá m na CVB pụọ wee bido ọrụ ọhụrụ nke m na-eme atụmatụ nwa oge ugbu a," “Enwere m obi ụtọ maka ihe m rụzuru na CVB na ụlọ ọrụ a, m na-atụ anya inye onyinye maka ịga nke ọma n’ọdịnihu na ụlọ ọrụ ndị njem. Ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ a dị ka onye na-ahụ maka ọnọdụ akụ na ụba maka mpaghara na steeti bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na m ga-enwe ike ịchụso nsogbu ndị a dị mkpa n'ọdịnihu.
Nlekọta nke ngalaba ahụ ga-agbanwe na Paul Beirnes, onye na-ere ahịa oge anyị nke na-eje ozi ugbu a dị ka onye osote Director nke CVB, n'ime ọnwa atọ na-abịanụ, malite na July 1, 2021. Beirnes sonyeere Naples, agwaetiti Marco, Everglades CVB na November 2020 dị ka onye osote onye isi njem nlegharị anya na esochi ọrụ 35 afọ n'ime ụlọ ọrụ ịre ahịa ahịa na-eburu onye isi ọrụ na Walt Disney Company, Gaa Orlando, na Hilton Corporate.